FAALO: MARKA MEEL LA ISKA DHIGO AL SHABAAB, MUQDISHO WAXAY LEEDAHAY CADOW KALE OO DAGAAL LAGULA JIRO MUQDISHO. | Kala soco warar Xul ah
FAALO: MARKA MEEL LA ISKA DHIGO AL SHABAAB, MUQDISHO WAXAY LEEDAHAY CADOW KALE OO DAGAAL LAGULA JIRO MUQDISHO.
Tallaabada ay qaaday Dowladda Soomaaliya oo garab ka heleyso Beesha Caalamka waxaa looga hortagi karaa Musuq maasuqa, iyadoo ay horey u jireen dhibaatooyin kale tani waxay noqoneysaa tallaabo cusub oo wax looga qabanayo dadka awoodda dowladda u isticmaalayo sida aan sharci aheyn gaar ahaan Saraakiisha Ciidamada Dowladda.
Askari ka tirsan Ciidamadda dowladda oo hubinayo aqoonsiga mid kamid ah Darawalada Baabuurta Muqdisho Sanado badan way hirgeli weysay in wax laga qabto dhaqanka Musuq Maasuqa ku saleysan ee ka dhex jiro Saraakiisha Ciidamada dowladda tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladda Dhexe ee uu hoggaamin jiray Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1991 markaas oo uu dalka Soomaaliya galay dagaalo sokeeyo oo socday muddo 20 sano ah.
Musuq Maasuqa iyo Laaluushka wuxuu Soomaaliya ka noqday wax caadi ah gaar ahaan qeybta saraakiisha Amniga qaabilsan, taas waxay sababtay inay Bulshada aqbalaan Musuq maasuqa joogtada ah ee dusha ka saaran waxaana sabab u ah Sharci darada wadanka ka jirto iyo inuusan jirin nidaam sax ah oo lagula dagaalamo Musuq maasuqa.
Dowladda hadda ka jirto Soomaaliya waxay ahmiyad gaar ah siisay sidii looga hortagi lahaa Masuq­ Maasuqaas iyadoo aan la iska indha tireyn dagaalka lagula jiro Ururka Xiriirka la leh Al­Qaacidda ee Al­Shabaab oo dowladda Soomaaliya culeys ku hayo isla markaasna mar kasta ka mashaquulinayo in si dhab ah looga hortago Musuq­ maasuqa.
Ilaa hadda Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa bilooyin badan ku celcelinayey in wax laga qabto Musuq Maasuqa ka jiro gudaha Saraakiishada iyo Ciidamada Dowladda kuwaas oo laaluush ka qaato Koontaroolada ay ka joogaan Magaalada Muqdisho midaas oo saameyn ku yeelaneyso Amniga Muqdisho.
” Askari kasta oo lasoo qabto isagoo Laaluush ku qaadanayo Kantaroolada Magaalada wuxuu wajihi doonaa Sharci adag iyo in lasoo saaro Maxkamad Militari” Digniintaan ayuu Thaabit ka jeediyey shirkii looga hadlayey Amniga Caasimadda ee dhacay Asbuucii hore.
Duqa Muqdisho Thabit Abdi Mar kasta oo ay Saraakiisha dowladda iyo madaxda dalka ay ka shiraan Amniga Caasimadda Muqdisho waxay Saraakiisha soo jeediyaan in wax laga qabto masuq maasuqa ka dhex jiro heerarka kala duwan ee Ciidamada midaas oo caqabad weyn ku ah wax ka qabashada xaaladaha Amni ee ka jiro Caasimadda Muqdisho. Kasloonidii ay Shacabka Muqdisho ku qabaneyn dowladda waxaa dhaawac weyn u geystay qaraxiii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Isgoyska Soobe ee Caasimadda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu Qaraxaas dhacay waxaa si weyn loo xoojiyey amniga Magaalada iyadoo Kontaroolada lasoo dhigay Ciidamo cusub si baaritaan guud loogu sameeyo gawaarida sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha taasoo ah isku day lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xasiloonidii Magaalada Muqdisho.
Waxaa Muuqato in qaabkaan cusub ee loo sugayo Amniga Muqdisho laga gaaray guulo waaweyn inkastoo ay weli wax kasta biliow yihiin.
Waxaa Qaraxii Soobe laga joogaa Asbuucyo iyadoo aysan Magaalada ka dhicin wax Qarax ah inkastoo weerar lagu qaaday Hotel Naasa Hablood 2 , waana sababta uu Duqa Muqdisho u dhahayo wax badan ayaa laga qabtay Amniga Muqdisho.
Sidoo kale qaabka cusub ee looga hortagayo musuq maasuqa ka dhex jiro Hey’adaha Amniga iyo dabagalka lagu hayo saraakiisha Laaluushka qaato wuxuu u muuqdaa nidaam hadda bilow ah .
Laakiin dagaalka cusub ee ka dhanka ah musuqmaasuqa ee nidaamka amniga iyo saraakiisha laaluushka qaato ayaa u muuqda in si habboon loo diyaariyay. Qorshayaasha lagu doonayo in lagu ugaarsado ayaa ah in lala socdo dhaq dhaqaaqooda iyadoo qalab lagu xirayo taleefannada gacanta si ay u ururiyaan caddayn ku saabsan ku lug lahaanshahooda kiisaska laaluushka.
” Ahmiyadeena koowaad waa la dagaalanka Musuq maasuq, waxaana hadda diyaarsan qorsho dhameystiran oo looga hortagayo” ayuu yiri Thabit Cabdi.
Tallaabada koowaad oo dowladda qaadeyso ayaa ah in lasoo qabqabto Ciidamada taagan Jidadka Muqdisho ee laaluushka ka qaato Bajaajyada Magaalada ka shaqeysto midaas oo ah habka ugu fudud ee wax looga qaban karo.
Dadka Magaalada Muqdisho ku nool ayaa si weyn usoo dhaweyn doono nidaamkaan cusub ee lagula dagaalamayo Musuq Maasuqa maadaama inta badan ay dhibaato kala kulmaan askarta lacagaha Laaluushka uga qaato Waddooyinka Magaalada, inkastoo ay shaki ka muujinayaan inay dowladda ka hortagi karto Musuq Maasuqaaan maadaama ay iyada dhibaatada wado, waxayna dalbanayaan in la helo hey’ado madax banaan oo arrintaan wax ka qabto.
” Qorshahaan cusub wax badan ayaa nagu caawin doonaa, balse waxaa muhiim ah in weyn looga taxadaro arrintaan, iyadoo laga fogaanayo in sarkaal aan dambi laheyn dusha laga saaro maadaama uu jiro xilfaatan gudaha ah oo ka dhaxeeyo Saraakiisha Ciidamada” ayuu yiri Mohamud Abdullahi oo ah korneyl howlgab ah oo ka tirsanaa Ciidamada
Si kastaba ha ahaatee, Nidaamka cusub ee musuq maasuqa looga hortgayo wuxuu dowladda iyo Beesha Caalamka ka caawinayaa in laga hortago Musuq maasuqa soo jireynka ahaa kaasoo dhibaato badan ku hayey dalka si loo dhameeyo dhaqanka ah in Saraakiisha ku takri falaan awoodda dowladeed.
“Kalsoonida dadwaynuhu waa furaha, tani waxay noqon doontaa talaabo muhiim ah oo lagu doonayo in lagu soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta” ayuu yiri Mr. Thabit Abdi oo ka hadlayey nidaamka cusub ee looga hortagayo musuq maasuqa.